"amashibhi andisa ubugebengu eNanda" | Ilanga News
Home Izindaba “amashibhi andisa ubugebengu eNanda”
“amashibhi andisa ubugebengu eNanda”
KUNEZINDAWO zaseNanda okwaziwayo ukuthi akuyi olubuyayo kuzona, uma ungeyena owendawo bakubona usanyathela emgwaqweni, kuthiwe ngeke udabule, uyophuma ungasa-wuphethe umakhalekhikhwini nesikhwama semali.
Lokhu kufakazelwe yizibalo ezikhishwe nguNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele ngoLwesihlanu olwedlule, oveze ukuthi iNanda iqenqeleza yodwa ezibalweni zobugebengu bokubulawa kwabantu ezenzeke kusukela mhla ka-1 kuMbasa (April) 2019 kuya kumhla ka-31 (kuNdasa) March.
ILANGA lihambele kule ndawo emuva kokuvela kwalezi zibalo, laxoxa nomphakathi ongawuvali umlomo ngezinga eliphezulu lokudlwengula. Bonke elikhulume nabo bacula iculo elilodwa, bathi bayethulela isigqoko le ndawo ngobugebengu.
UMnu Mzi Dubazana (37), uthi bengamadoda asendaweni sebekhethe ukuzibambela ukulwa nobugebengu obuqhubekayo. Uthi banenhlangano yabo elwa nobugebengu. “Siyazibambela singamadoda endawo, sizama ukunciphisa ubugebengu.
“Sizifikela mathupha kumuntu esizwe kuthiwa uyaganga, siyazama ukubambisana nohulumeni wethu ukuze sehlise ubugebengu. Izibalo ezikhishwe ngungqongqoshe kazisethusanga ngoba yinto esiyaziyo ukuthi iyenzeka eNanda,” kusho uMnu Dubazana.
Uthi umndeni wakhe uhlala emakhaya eMpangeni, akafisi nangelilodwa ilanga izingane zakhe zimvakashele kule ndawo ahlala kuyona.
Uthi uhleli ngenxa yomsebenzi, kodwa akuyona indawo angafisa ukukhulisela izingane zakhe kuyona. Imini nobusuku uthi kuyafana, abantu ubafica behla benyuka ngisho phakathi kwamabili kube sengathi yisemini.
UNkz Peggy Zungu (83), waseMzomusha, eNanda, uthi uyethulela isigqoko iNanda. “Sengineminyaka eminingi ngihlala kule ndawo, kodwa kangicabangi ukuhlala endlini ngingawakhiyile amasango ngenxa yobugebengu,” kusho uNkk Zungu.
Uthi inkunzi ibanjwa emini kwabha, sekwaze kwaba yinto abayijwayelayo ukuzwa kumenyezwa emini kuthiwa vimba.
UMnu Dennis Ngubane (65), uthi umphakathi uma ungabambisana, bangabunqoba ubugebengu endaweni yabo. Uthi ukudlwengulwa kwabesifazane ngenye yezinto ezibakhathaza kakhulu njengoba kuhlale kubikwa ngazo. Uthi okunye okubukeka kuyi-nkinga endaweni yabo, wukugqekezwa nokubanjwa kwabantu inkunzi.
Uthi uma uya emsebenzini kusemnyama, kumele uphelezelwe ngoba kunezindawo okwaziwayo ukuthi ngeke udlule kuzona.
UMnu Mzwandile Ntshangase ongusihlalo we-Inanda Community Police Forum, uveze ukuthi izindawo zokucima ukoma ezingekho emthethweni zingenye yezinto ezinomthelela ebugebengwini.
Previous article‘Ubulale wagqiba unina ethoyilethi’
Next articleKunconywa iChiefs ngokumisa uBobby